Jean-Michel Cousteau Resort, Fiji Zvino Inogamuchira Vashanyi Vanodzoka, Vanovhurazve Nyika
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Fiji Breaking Nhau » Jean-Michel Cousteau Resort, Fiji Zvino Inogamuchira Vashanyi Vanodzoka, Vanovhurazve Nyika
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Fiji Breaking Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Resorts • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo
Jean-Michel Cousteau Resort, Fiji, iyo yekutanga eco-adventure yekuenda kuSouth Pacific, yakagadzirira kugamuchira vashanyi vayo vekutanga mushure memwedzi yakavharwa kune vafambi vekunze, nekuda kwedenda. Yakavakirwa munzvimbo yakasarudzika, ine hunyoro inotonhorera pachitsuwa cheVanua Levu yakatarisana nemvura ine runyararo yeSavusavu Bay, Jean-Michel Cousteau Resort ndiyo yekutiza kwevakaroora, mhuri, uye vafambi vanonzwisisa vanotsvaga zororo, kushanya, uye recharge yemhando yepamusoro mushure memwedzi yekugara padyo nepamba.
Fiji inotarisira kuvhurazve kune vafambi vekunze (kusanganisira vafambi vanobva kuUSA) kubva kutanga kwaMbudzi.
Eco-yakasarudzika nzvimbo kuVanua Levu Island muSouth Pacific inopa imwe-ye-ye-mhando zviitiko uye zviitiko.
Vashandi vepa resort vakabaiwa zvakakwana, vakadzidziswa, uye vakazvipira kupfuuridza mwero wepamusoro weCOVID-19 chengetedzo uye hutsanana.
"Tinofara kugamuchira zvakare vashanyi vedu uye shamwari dzinodzoka kuJean-Michel Cousteau Resort," akadaro Bartholomew Simpson, General Manager we Jean-Michel Cousteau Resort, Fiji. “Hatigone kumirira kuti vaone mufaro muzviso zvavo uye tinzwe kuseka sezvavanoshanyirazve chitsuwa chedu kuti vanakidzwe uye vaongorore zvishamiso zvakasarudzika zvekuenda kwedu kuSouth Pacific. Munguva ino isina kumboitika nguva munhoroondo yedu, vashandi vedu vekushandira vakashanda nesimba kuti vachengetedze runako rweimba iyi tichichengetedza kuzvipira kwedu kunharaunda. Takagadzirira kupa vaenzi vedu zororo rakanaka, risingakanganwike. ”
The Jean-Michel Cousteau Resort Vashandi vakabaiwa zvakakwana, vakadzidziswa uye vakazvipira kupfuudza mwero wepamusoro weCOVID-19 chengetedzo uye hutsanana zviyero vachipa basa rehunyanzvi nekutambira vatengi. Vashandi vachakwazisa vaenzi nekufukidza kumeso, uye mune dzimwe nguva magurovhosi, apo vachivimbisa kugara pamwe nemuviri. Pamusoro pezvo, nzvimbo dzese dzakakwirira dzekubata dzinoshambidzwa nekushambidzwa kazhinji.
Zvekuchengetedza uye nerumwe ruzivo nezveJean-Michel Cousteau Resort, ndapota shanya fijiresort.com.
Mubairo unohwina mubairo-Jean-Michel Cousteau Resort ndiyo imwe yenzvimbo dzinozivikanwa dzekuzorora muSouth Pacific. Iri pachitsuwa cheVanua Levu uye yakavakirwa pamaeka 17 epasi, nzvimbo yekutandarira inotarisa mvura ine runyararo yeSavusavu Bay uye inopa mukana wekupukunyuka kwevakaroora, mhuri, uye vafambi vanonzwisisa vachitsvaga ruzivo rwekufamba pamwe nehunhu hwechokwadi uye tsika yemuno. Jean-Michel Cousteau Resort inopa chiitiko chisingakanganwiki chezororo chinotorwa kubva parunako rweichi chitsuwa, kutarisisa kwevanhu, uye kudziya kwevashandi. Nzvimbo yekuchengetedza nharaunda pamwe nevemagariro inopa vashanyi zvinhu zvakasiyana siyana, zvinosanganisira zvakagadzirwa neuswa-denga mabhureki, yekudyira yepasirese, mutsara wakatanhamara wezviitiko zvekuvaraidza, zvisingaenzaniswi nezvezvakatipoteredza, uye maratidziro eFijian-akafuridzirwa marapa ekurapa. fijiresort.com
Nezve Canyon Equity LLC
Iyo Canyon Boka reMakambani, ayo ane nzvimbo yekutandarira, inotungamirwa muLarkspur, California, yakavambwa muna Chivabvu 2005. Iyo mantra ndeyokuwana nekuvandudza madiki emhando yepamusoro-emhando emahotera munzvimbo dzakasarudzika nenzvimbo diki dzekugara dzichigadzira pfungwa yakasarudzika asi inoenderana kwazvo. yenharaunda munzvimbo yega yega. Kubva payakaumbwa muna 2005 Canyon yakagadzira nzvimbo inoshamisa yemahotera, munzvimbo dzinotangira kumvura inodzikama yeFiji, kusvika pamusoro soro reYellowstone, kumakoroni emaSanta Fe, uye muCanyons yekumaodzanyemba kweUtah.
Portfolio yeCanyon Group ine zvivakwa zvakadai seAmangiri (Utah), Amangani (Jackson, Wyoming), Four Seasons Resort Rancho Encantado (Santa Fe, New Mexico), Jean-Michel Cousteau Resort (Fiji), uye Dunton Hot Springs, (Dunton , Colorado). Zvimwe zviitiko zvitsva zvinokatyamadza zviri kuendererawo munzvimbo dzakadai sePapagayo Peninsula, Costa Rica, uye Hacienda ane makore mazana mana ekuberekwa muMexico, zvese zvakafanirwa kuita zvirevo zvikuru mumusika we niche wekufamba-famba kwepasirese kwese kwese sezvo imwe neimwe ichitangwa . canyonequity.com